Iilebheli zokuhlamba iimpahla zenziwe ngezinto zePPS ezizinzileyo nezilunge ngakumbi. Esi sixhobo seplastikhi yentlaka yobunjineli obuphezulu kunye nobume obuzinzileyo. Inezinto ezilungileyo zokumelana nobushushu obuphezulu, ukusebenza kakuhle kwe-insulation, ukumelana neekhemikhali, ukungabinetyhefu, ukudodobala kwelangatye kunye nezinye izibonelelo. esetyenziswa ngokubanzi.
Iithegi zangaphambili zeRFID zokuhlamba iimpahla ngokubanzi zazenziwe ngezinto zecwecwe lesilicone, ezaziwa ngokuba ziiRFID abicah iimpahla zokuhlamba iimpahla. Emva kwexesha, ngenxa yeengxaki ezisemgangathweni zeleyibhile yokuhlamba iimpahla, ewe, ayisiyiyo ukuba kukho ingxaki esemgangathweni kwimveliso, kodwa ileyibhile yokuhlamba iimpahla abicah nayo iya kuba nokuwa okunzulu ngexesha lokusetyenziswa, kwaye isantya sokungenisa siyacotha ukuyeka imveliso. Okwangoku, ileyibheli yokuhlamba impahla yenziwe ngezinto zePSP ezinzileyo kwaye ezilungele oko. Lo mbandela ulungelelwaniso oluzinzileyo oluphezulu lwe-crystalline yeplastiki yobunjineli, eneenzuzo zokumelana nokushisa okuphezulu, ukusebenza kakuhle kokumisa, ukuchasana kweekhemikhali, ukungabi netyhefu, ukudibanisa ilangatye, njl.
Uluhlu lwesicelo sethegi yokuhlamba iimpahla
Isetyenziswe kwindawo ezinobushushu obuphezulu ezinjengokuchongwa kwempahla yokuhlamba iimpahla. Inempawu zokungangenwa ngamanzi, ukungabi nalo uthuli, ukunganyangeki ukubola, ukuphakama okuphezulu / okuphantsi kobushushu, njl. Ayiphelelanga kuphela kwizicelo zokuhlamba iimpahla, kodwa ikwasetyenziswa ngokubanzi kwiindawo ezininzi ezinzima zenkqubo yolawulo lwenkqubo kunye nolawulo lokuzenzekelayo. "," Ukumelana noxinzelelo "," ukumelana nobushushu "," into yokuthintela ialkali "kunye nezinye izinto zemveliso, ukuqinisekisa ukusetyenziswa kweemeko ezahlukeneyo zokusingqongileyo, ukuzinza okuphezulu kakhulu kunokuqinisekisa ngaphezulu kwemijikelo yokuhlamba eyi-200. Zininzi ezinye izicelo zeleyibhile ezifana nokuchongwa kweinjini yemoto, ukulandelela izinto ezingafunekiyo zemichiza njalo njalo.
Indawo yokusetyenziswa kwethegi yokuhlamba impahla yeRFID
Iimpawu zeRFID zokuhlamba iimpahla zingasetyenziswa kwiimveliso eziqinileyo nezomeleleyo zomatshini; iimveliso zombane ezifuna ukumelana nobushushu kunye nokumelana nelangatye; nakwizixhobo zeekhemikhali ezifuna ukumelana nokubola. Ngokukodwa phantsi kweemeko zobushushu obuphezulu, ukufuma okuphezulu kunye nokuhamba rhoqo, iseneempawu zombane ezigqwesileyo. Imodeli yokusebenziseka inokusetyenziswa kwimeko ezibi zemozulu ezinobushushu obuphezulu, ukufuma okuphezulu, ukunxiba ukumelana kunye nokumelana nomhlwa.